''Gaaffii ummataa hoggantootaan geenya'': Dargaggoota - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dargaggoonni afur Baaleerraa ka'anii imala lafootiin Finfinnee galan
Dargaggonni afur baalee magaalaa Gindhiir irraa miilaan kiloomeetira 500 ol adeemuun gaaffii ummataa hoggantoota biraan geenya jechuun Finfinneetti imala taasisan. Dargaggoonni kunneen, hanga ammaa nu milkaa'uu dhabus Ministira Muummee Dr. Abiiy fi Pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa arguu barbaanna jedhaniiru.
Namoota imala taasisan keessaa tokko kan ta'e Mohaammad Kadir, Kayyoo imala kanaa ibsuun eegala.
''Saba keenya maaliin haa deggerru, maaliin haa yaadannu kan jedhuun kaane'' jedha dargaggoon kun.
Namni waan qabuun saba gargaara , nutis dargaggoonni kunneen maaliin saba keenya haa deggerru kan jedhuun kaane jedha dargaggoo Mohaammad. Duudhaa abbootiin kaleessaa keessa turanii fi waan qeerroon har'aa qooddachuu qabu jabeessuuf akka kaayyeeffatanillee dubbateera dargaggoon kun.
''Kaleessa abbootiin keenya imala lafootiin shawaa deemanii dhaamsa dabarfachaa turani. Qeerroon ammaas yoo geejjibni dhabame ergaan dhabarfachuu dandeenyaa kan jedhuun tokkummaa Oromoof yaadnee imala kanaaf yaalii goone.
Kaayyoon tokko kana.Inni kan biraammoo yaadannoo wareegamtootaati. Ummati keenya akka malee asiin dura nu duraa dhumaa ture. Ammoo haala yeroo ammaa kanaa ilaalchisees gammachuu hawaasa keessa jirullee qaamumaan hooggantoota haaromsaan dhufan kana bira deemnee itti himuu yaadneeti.
Imala lafootiin walquunnamuunillee akka danda'amu ummata keenya barsiisuudhaa. Ummanni keenya fuulduratti tokkummaansaa akka hin diigamne imalli lafoo kun ga'ee guddaa qaba. Ummata keenya naannoo Sumaaleetii buqqa'anillee yaadachuudhaafi.
Wanta biraa ittiin qarqaarru waan hin qabneef kanumaanillee yaadannaa jenneeti. Kaayyoo keenya gurguddoo kanuma.'' jechuun yaadasaa ibseera.
Daandiin Baalee hedduun konkolaataaf rakkisaa ta'uu kan dubbatu dargaggoon kun kaayyoo fi kutannoon qabsoo ummata keenyaaf qabnu abdii isaanitti horuu dubbatu, deggersi hawaasaas nurraa hin cinne jedhu.
Imala guyyoota kudha torbaa kana keessatti rakkoon isin hin mudannee, karaarra bulaa turtanmoo akkam taatan gaaffii jedhu gaafanneerra.
''Ummanni keenya bakka deemnu hundattuu haala ho'aadhaan nu simachaa ture. Akkaataa hin yaadamneen nu simatan. Deemnee dhufnee wayita baddaa Baalee naannoo Diinshoo geenyu nutti cimatee ture,nuti gammoojjiirraa dhufne waan ta'eef.
Dibaabee nuuf bitanii, uffata nuuf godhanii, nyaatas, naannoo Garambaa jedhamu seensa Baaleerratti nutti qalanii nu nyaachisanii,humna nuuf ta'anii nu geggeessaniitu haala kanaan as geenye. Hanga Finfinnee seennutti deggersi ummataa nurraa hin cinne. Rakkoon nu mudate tokkollee hin jiru'' jedheera.
Muummicha Ministiraa Dr.Abiyyi Ahmadiin utuu fuulaa fi fulatti argattee maal akka itti himuu danda'us dubbateera.
''Nuti wal haa taanu, gaaffiin saba keenyaa guutummaa guutuutti haa deebi'uu jenna. Irra dhahaan maleetti guutummaa guutuutti saba keenya bira haa dhaabbannu yaada jedhu qabna jedha Mohaammad.
Dargaggoonni kunneen waan hunda caalaa tokkummaa fi walitti dhufeenya sabichaa cimsuuf kaayyeeffatanii imala akkanaa akka eegalan Mohaammad bseera.